एक लिटर इन्धनले कति उड्छ हवाईजहाज ? | Radio Langtang 90.3 Mhz
हवाईजहाजले कति माइलेज दिन्छ, तपाइँलाई थाहा छ ? यदि थाहा छैन भने यो पढ्नुहोस् ।
भिमकाय जहाजले एक किलोमिटर दूरी पार गर्नका लागि कति इन्धन खपत गर्दछ ?
समाचार अनुसार बोइङ ७४७ ले एक मिनेटको यात्राका क्रममा २४० लिटर इन्धन खर्च गर्दछ । यो विमानले १२ घण्टाको यात्राको क्रममा १ लाख ७२ हजार लिटर इन्धन खपत गर्दछ ।
एक किलोमिटर यात्राका क्रममा बोइङ ७४७ ले १२ लिटर इन्धन खपत गर्छ । यसको अर्थ ५ सय यात्रुलाई यो विमानले १२ लिटर इन्धनले १ किमी यात्रा गराउँदछ । यो भनेको प्र्रतिव्यक्ति एक किलोमिटर उडानका लागि ०.०२४ लिटर इन्धन हो ।
१ सय किलोमिटरको यात्राका क्रममा बोइङले प्रतिव्यक्ति २.४ लिटर इन्धन खर्च गर्दछ । यो कारले खर्च गर्ने भन्दा कम हो । एक कारले १ सय किलोमिटरमा ४ लिटर इन्धन खर्च गर्दछ ।
अर्गानिक प्रदेश बनाउँछौं
भदौ ११ ,प्रतिष्ठित गायन प्रतियोगिता नेपाल आइडलको ‘फिनाले’ कतारमा हुन भएको छ । कतारको एसियन क्रिकेट टाउनमा आउँदो असोज ६ ...
चलचित्र ‘प्रेमगीत’ हिट भएपछि नायक प्रदिप खड्काको क्रेज पनि ह्वात्तै बढ्यो । प्रदिपको मुस्कान भनेपछि भुतुक्कै हुने फ्यानहरु बढे । ...
जिग्री पाँडे प्रतिष्ठानले सप्तरीका तीन दृष्टिविहिन परिवारलाई घरको साँचो हस्तान्तरण गरेको छ । हास्य कलाकार कुमार कट्टेल (जिग्री)को जन्म दिनको अवसरमा दृष्टिविहिन परिवारलाई दाजु सिताराम ...